Doorashada Madaxweynaha dalka
10 Sep 10, 2012 - 12:53:40 AM
9:42 Waxana si rasmi ah loo soo xirey kalfadhigii Barlamanka ee lagu dooranayey madaxweynaha Somalia.
9:42 Gudoonka Barlamanku waxa uu sheegey inay jiri doonto maalin caleemo saar ah oo gadaal laga soo sheegayo.
9:41 Hadalkiisi wuu soo gabagabeeyey madxweynuhu oo sheegey hadal badan inaan laga oran karin meeshan.
9:40 Madaxweynuhu waxa uu ka codsadey shacabka inay taageeraan si hawshiisa uu u guto.
9:37 Madaxweyne Xasan Shiikh Maxamuud ayaa hadlaya hadda oo mahad ku bilaabey xubnaha Barlamanka Somalia.
9:36 Magaca Alle yuu ku dhaartey Xasan Shiikh Maxamuud inuu dalka ,diinta iyo dadkaba ugu shaqeynayo Somalia.
9:35 Madaxweynaha JF Somalia ayaa haatan soo istaagey ,waxana hataan dhaarinaya gudoomiyaha maxkamada sare Caydiid Ilko-xanaf.
9:33 Shariif waxa uu ku wareejiyey madaxweynaha cusub taliyaasha ciidamada nabadsugida,Xooga dalka ,booliska oo uu sheegey inay ka amar qaadanayaan Xasan Shiikh Maxamuud.
9:32 Shariif ''Waxaan dalka soo gaarsiiyey in laga saaro KMG-nimada''
9:30 Shariif ''Waxaan la shaqeynayaa dowladda cusub,wixii la iga baahdona diyaar ban u ahay''.
9:29 Shariif ''Waa la iga guuleystey ,waxaanse hada dhex fadhinayaa shacabkeyga''.
9:28 Madaxweynihii hore ee Somalia Shariif Shiikh Axmed oo laga adkaadey tartanka ayaa hadlaya hada,waxana uu sheegey in farxad u tahay in dalka doorasho ka dhacdey xalaal ah 42 sanno kadib.
9:27 Madaxweynaha Puntland Dr.Cabdiraxman Maxamed Farole ayaa hanbalyo u direy Xasan Shiikh Maxamuud madaxweynaha cusub ee DF Somalia.
9:26 Jawaari ayaa hadlaka dib loogu soo celiyey.
9:25 Maryan: ''Madaxweyne Xasan Shiikh Maxamuud waxa lagu doortey ciidiisa dusheeda''.
9:24 Guddiga doorashooyinka madaxtinimo : ''Waa maalin taariikhi u ah umadda Soomaliyeed''.
9:23 Sacab iyo hees calanka Somalia ayaa la qaadey kadib markii si rasmi ah ugu dhawaaqey Prof.Jawaari guusha Xasan Shiikh Maxamuud.
9:23 Si rasmi ah waxa madxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Somalia loogu dhawaaqey Xasan Shiikh Maxamuud.
9:22 Madaxweyne Xasan Shiikh Maxamuud waxa uu helay 190 cod.
9:21 Shariif waxa uu helay 79 cod 9:20 Jawaari ayaa hadlaya oo natiijada ku dhawaaqaya
9:19 269 xildhibaan ayaa codeeyey
9:16 Goor dhow ayaa lagu dhawaaqayaa natiijada ,waxana xoghaynat la codsnayaa inay dedejiyaan soo gudbinta natiijada.
9:14 Waxa is dhinac fadhiya haatan Madaxweynaha cusub iyo madaxweynihii hore.
9:11 Natiijada doorashada wareega saddexaad e rasmiga ah ayaa lagu dhawaaqayaa hadda.
9:09 Puntland ayaa lagu wadaa goordhow inay soo dhoweyso doorashada madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyada Federaalka Somalia.
9:05 Hayada CRD ee qaabilsan horumarinta ayuu agaasime kuxigeen ka ahaa muddo ka badan 7sanno.
9:04 Waxa uu Muqdisho 1999 ka asaasey machadka Simad oo markii danbe Jaamacad isku bedeshey.
9:03 Xasan Shiikh waxa uu ku dhashey Beladweyne waxana uu ka baxay jaamacada Muqdisho isagoona kadib India u aadey Darajada Masterka.
9:02 Xasan Shiikh Maxamuud Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Somalia.
9:00 Sanduuqii labaadna waa dhamaadey.waxana mar dhow lagu dhawaqaya guusha Xasan Shiikh Maxamuud.
8:57 tirinta codadku waa ay socotaa weli si rasmi ahna looguma dhawaaqin madaxweynaha guuleystey.
8:56 Dabaaldegyo ayaa durba ka bilaabmey magaalooyinka dalka oo lagu soo dhaweynayo guusha Xasan Shiikh Maxamuud madxweynaha Somalia.
8:55 Xasan Shiikh Maxamuud ayaa ku hogaaminaya waxaan caadi ahayn.
8:51 Xildhibaanada ayaa laga codsadey inay buuqa yareeyaan iyo sacabka.
8:50 Afartii warqadood ee ugu horeysey sanduuqa labaad Xasan Shiikh Maxamuud ayaa la yeeriyey magaciisa.
8:47 Sanduuqii koowaad tirinta codadkiisi waa dhamaatey.
8:46 Musharax Xasan Shiikh Maxamuud oo boqolkii cod maraya waa uu aamusanyahay waxana uu u fekerayaa si qoto dheer.
8:44 Mushrax Shariif wajigiisa guul darro ayaa ka muuqata iyo in laga adkaadey.
8:42 Shariif 30 cod ayuu wataa iyo ilaa hadda inta la tiriyey.
8:40 Xasan Shiikh Maxamuud waxa uu leeyahay 80 ilaa iyo hadda codadkii la tiriyey.
8:35 Musharax Xasan Shiikh Maxamuud ayaa hogaminaya tirinta codadka sanduuqa kowaad.
8:30 Tirinta codadkii sanduuqa koowaad ayaa socda.
8:28 Ma jirto cid ka warami karta dareenka labada musharax ee iskugu soo harey tartanka xilka madaxweynaha Somalia.
8:26 Codadka tirintooda ayaa bilaabmatey.
8:21 FG Xildhibaankii aan codeynin ha soo sheego
8:20 Codeyntii waa dhamaatey
7:50 Codeyntii wareega saddexaad ayaa maraysa meel dhexe.
7:25 ku dhowaad 60 mudane ayaa u codeeyey wareega saddexaad tartanka doorasho.
7:14 Shariif iyo Xasan ayaa u tartamaya wareega ugu danbeeya doorashada madaxtinimo Somalia.
7:13 Guddiga doorashada ayaa ku xiga oo haatan codeynaya dhankooda.
7:12 Xildhibaan Prof.Maxamed Cismaan Jawaari waa codeeyey,waxana ku xigey labadiisa ku xigeen.
7:10 Wareegii saddexaad uguna danbeeyey ayaa bilaabmey hadda.waxana loo yeerey gudoonka Barlamanka Prof.Jawaari.
7:09 ''Xildhibaan baan nahay'' hees ka bilaabmata ayay ka qaadey meesha inkastoo music uusan la socon,haddana miruhu waxay soo jiiteen mudanayaasha.
7:08 Saado hadal ayaa laga siiyey waxana ay jeedineysaa murti
7:07 Xildhibaan Saado Cali Warsame ayaa loo yeerey hada.
7:02 Xoghaynta ayaa u diyaar garoobeysa wareega saddexaad iyo daabacaada warqadaha mudanayaashu ku codeynayaan.
7:00 Hal cod ayaa lagu kala qaadayaa madaxtinimada dalka
6:59 Waxaa meesha ka baxay wareegii labaad maadama ay laba musharax tanaasuleen ,waxana wareega saddexaad ku kala baxaya Shariif Shiikh Axmed iyo Xasan Shiikh Maxamuud.
6:58 Cosoble : ‘’ Waan tanaasuley oo waxaan cadeynayaa inaan ka baxay tartanka’’.
6:57 Musharax Cabdiqaadir Cosoble ayaa soo istaagey isna oo la filayo inuu is casilo.
6:56 Prof.Gaas : ‘’Somalia waxay u baahantahay Isbedel’’.
6:53 Musharax Cabdiweli Maxamed Cali ayaa khubaynaya waxana uu
iska casiley tartanka madaxtinimo.
6:51 Musharaxiinta ayaa dhexdooda mid labo isugu shiraya (Afartii wareega labaad u soo baxdey).
6:49 Gudoomiyaha Barlamanka Prof.Jawaari ayaa isku diyaarinaya inuu hadlo waxana dhinac taagan labada xubnood ka tirsan guddiga doorashada.
6:48 Waxa la isugu soo laabt hoolka oo lagu dhawaaqayo natiijada rasmiga ah ee doorashada wareegeedi koowaad.
6:38 Warar aan la hubin oo sheegaya in isbahaysi dhexmari doono Prof.Gaas iyo Xasan Shiikh Maxamuud.
6:28 Hakad ayaa weli waxa ku jira fadhiga Barlamanka,waxana jira weli mudanayaal banaanka ku maqan oo aan soo xaroon.
6:08 Hala fariisto anshaxana hala ilaaliyo ayaa ka dhex yeereysaa hoolka.
6:07 Xildhibaanada oo laga codsadey in dedejiyaan wakhtiga si loo galo wareega labaad waxana hoolka ku soo laabtey badi xildhibaanadii.
5:51 Shariif waxa uu helay 64 ,Xasan Sh.Maxmuud 60 ,Cabdiweli Maxamed Cali Gaas 43 halka Cosoble haysto 27 cod ,waa codadkii Garowe Online tiriyey balse natiijada rasmiga ah dhowan yaan idin soo gudbineynaa marka guddigu ku dhawaaqo.
5:47 Fasax gaaban ayaa la qaatey ,waxana loo baxay gudashada Salaadaha Casar iyo Maqribka.
5:39 Musharaxiin ayaa jira u taagnaa xilka madaxtinimo oo wax codad ah aan helin sida Salaad Cali Jeele iyo Maslax Maxamed Siyaad Barre.
5:35 Waxaa la filayaa inay afrtaas musharax u gudbaan wareega labaad.
5:34 Codadka tirintooda ayaa socota waxana ugu horeeya Shariif ,Xuseen Shiikh Maxamuud ayaa ku xiga ,Cabdiweli Maxamed Cali kaalinta saddexaad ayuu ku jiraa halka Cabdiqaadir Cosoble uu afar soo galay.
5:33 Sanduuqii labaadna waa dhamaadey codkii ugu danbeeyey waxa uu noqdey Cabdulaahi Axmed Cadow.
5:32 Musharaxiinta qaar wajigooda waxa ka muuqda naxdin iyo feker halka qaarkood si fiican caagadaha biyaha iskugu daldalayaan.
5:29 Shariif Shiikh Axmed iyo Xasan Shiikh Maxamuud oo si xowli ah u socda tirinta codadka wareegaa koowaad.
5:12 Sanduuqa labaad ayaa la furey waxana warqadii ugu horeysey noqotey Xasan Shiikh Maxamuud.
5:10 Sanduuqii kowaad waa dhamaadeen warqadihii ku jirey oo dhamaan waa la tiiryey ,waxana socda Shariif iyo Xasan Shiikh Maxamuud halka Gaas iyo Baadiyow ay ku soo xigaan.
4:58 Xasan Shiikh Maxamuud ,Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo Prof.Baadiyow oo ku soo xiga.
4:57 Shariif Shiikh Axmed oo ugu badan warqadaha la tiriyey.
4:48 Cabdiweli Maxamed Cali Gaas warqadii labaad.
4:47 Warqadii ugu horeysey Cabdiraxman Cabdale Baadiyow.
4:44 Sanduuqii ugu horeeyey ayaa la furey ,waxana la bilaabayaa tirinta codadka wareega koowaad.
4:38 Magacyada wakiilada musharaxiinta ayaa haatan la akhrinayaa.
4:27 Musharaxiinta oo laga sugayo inay soo gudbiyaan magacyada dadka codadka u tirinaya.
4:24 Codeyntii wareega kowaad oo dhamaatey iyo hubinta dhamaan magacyada xildhibaanada inay codeyeen oo socota.
4:11 Xildhibaan Shariif Xasan Shiikh Aadan waa codeeyey.
4:10 Weli waxa lagu jiraa codeyntii wareega kowaad ee doorashda madaxtinimo Somalia.
3:48 In ka badan kala bar tirada xildhibaanada oo codeysey wareegii koowaad.
3:25 Xildhibaan Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waa codeeyey.
3:10 Waxa socota codeynta doorashada madaxtinimo.
3:05 Xildhibaan /Gudoomiye Barlaman Prof Jawaari waa codeeyey.
3:03 Gudoomiyihii waa uu soo laabtey waxana bilaabmey codeynta doorashada madaxtinimo oo uu bilaabey Gudoomiyaha Barlamanka ,waxa xiga kuxigeenadiisa kadibna guddiga doorashada ayaa codeynaya.
3:00 Wakiilo ka socda Qaramada Midoobey ,Midowga Yurub ,Midowga Afrika ,IGAD iyo safiiro ayaa ku sugan hoolka oo dhankooda kor joogto ka ah sida ay u dhaceyso doorashadu
2:59 Gudoomiyaha Barlamanku waa uu ka maqanyahay kurisigiisa ,waxana la sheegayaa inuu guddiga doorasha uu kulan la leeyahay.
2:50 Waxa jira wakiilo ay musharaxiintu leeyihiin oo tirinta codadka goob-joog ka noqonaya marka ay dhamato cod bixintu.
2:49 Warqad ayaa lagu codeynayaa ay ku qoranyihiin dhamaan magacyada musharaxiinta ee 22-ka ah waxana mid kasta hortiisa ku sawiran sanduuq la rabo in isku talaab ama X lagu dhex qoro halka musharax ee xildhibaanku codkiisa siinayo.
2:45 Magacyada musharaxiinta ayaa lagu celiyey mar labaad.
2:43 Qafil ayaa lagu dhuftey sanaadiiqda doorashada oo furayaashoodi jeebka uu gashtey gudoomiyaha Barlamanku kaasi oo furi doona marka ay dhamaato codeynta kowaad.
2:42 Sanduuqyada labada ah ee warqadaha doorashada la gelinayo ayaa waxa hubsadey Gudoonka Barlamanka Prof.Jawaari.
2:39 Albaabada hoolka ayaa la xirey waxana bilaabaya doorashada gudoomiyaha Barlamanka Prof.Maxamed Shiikh Cismaan Jawaari.
2:36 Xildhibaanada warqad ayaa la siinaya uu u saxiixayo gudoomiyaha Barlamanka hadayse dhacdo inuusan saxiixa qaadan waxay noqoneysa warqadaasi mid aan waxba laga soo qaadeyn.
2:36 Guddiga doorashada ayaa lagu wareejiyey shaqada si loo guda galo wareega kowaad ee doorashada.
2:35 Jawaari waxa uu sheegey in xildhibaanada lagu soo darey maanta ay garanayaan danta Somalia isagoona kula dardaarmey inay hufnaan u shaqeeyaan.
2:34 Mar labaad : Musharaxu codadka uu helo musharax kale ma siin karo mid kale hadii uu tanaasulayo.
2:31 Xildhibaanada Barlamanka Somalia ayaa loo akhrinayaa mar labaad qaabka ay u dhaceyso doorashada madaxweynaha JF Somalia.
2:30 Shirkii dib ayuu u furmey waxana hadlaya gudoomiye Jawaari,waxana fadhiya 262 oo uu dalbey in la soo daabaco waraaqahooda.
2:28 Musharaxiinta ayaa shekeysanaya ,waxana soo baxaya warar is xulifeysi qaarkood ku soo heshiyeen intii yareyd oo fasaxa.
2:26 Booliska Somalia iyo kan AMISOM ayaa wadajir u sugaya amaanka hoolka 2:25 Jawaari iyo ku xigeenadiisa ayaa iyaguna soo laabtey oo booskoodi ku soo noqdey.
2:24 Xildhibaankii ugu danbeeyey ayaa la dhaariyey ,waxana muuqata inay doorashada codeynteeda ka qayb galayaan.
2:18 Waxaa haatan la dhaarinayaa 20 xildhibaan oo mar dhoweyd loo qaadey codka in lagu soo daro Barlamanka oo ay ka mid yihiin Cumar Finish ,Maxamed Qanyare Afrax iyo kuwo kale oo kamida dadkii horey u celiyeen Guddigii farsamo.
02:15 Hoolka ayaa dhamaan lagu soo wada laabtey kadib saacad in ka badan oo Qado iyo Salaad loo baxay. 1:44 Kumanaan Somali ah ayaa Doorashadan taariikhiga dalka u ah indhaha ku haya iyagoona dhamaan rajo ka qaba in Somalia markii ugu horeysey 20sanno ay dowladd dhamaystiran noqoto.
1:37 Si tartiib tartiib ah ayaa hoolka dib loogu soo labanayaa.
1:28 Weli waxa lagu maqanyahay Qadadii & Salaadii Duhur ,waxana la soo dhigey madasha labada sanduuq ee lagu codeynayo.
1:16 Amaanka Muqdisho ayaa si weyn loo adkeeyey ,waxaan hakad la geliyey isku socodka gadiidka iyo gawaariada degmada Xamar-Jajab oo ka dhacayo shirku iyadoona maanta guud ahaan iskuuladu fasax ahaayeen.
1:15 Kulamo gooni gooni ah ayaa hoolka dhexdiisa ka socda iyo labo labo la iskula taaganyahay.
1:00 Qado ayaa loo fasaxey xildhibaanada iyo Salaadii duhur waxana dib la iskugu soo labanayaa kadib doorashada oo la guda galayo.
12:58 Waxa la dhaarinayaa dhankooda 20 xildhibaan oo daqiiqado ka hor la ogolaadey inay ku soo biiraan golaha kadib markii ay horey u celiyeen Guddigii Farsamo ee qaabilsanaa xulista xubnaha Barlamanka (TSC).
12:56 Warqadihii lagu codeyn lahaa ayaa la soo daabacayaa hada mar kale kadib tanaasulkii musharaxiinta qaar.
12:54 Warqad ayaa lagu codeynayaa ay ku qoranyihiin dhamaan magacayada musharaxinta oo hortooda sanduuq uu ku sawiranayahy ,waxana la doonayaa in x lagu dhex qoro cida ay u dooranayaan madaxweynaha.
12:53 Magacyada musharaxiinta ayaa haatan laga hor akhriyey xildhibaanada.
12:51 22 Musharax ayaa haatan u taagan xilka madaxweynaha Somalia oo mar dhow bilaabmeysa.
12;50 Saddex Musharax ayaa hada tanaasuley oo kale Xuseen Khaliif Jaamac ,Bashiir Nuur Bidaar iyo Cabdiraxman Cabdishakuur oo isagu shalay shaaciyey inuu tanaasley.
12:49 Musharaxiinta waxa loo sheegeyaa inay codkooda siiyaan musharax kale in ay reeban tahay oo aan la ogayn ,waxana hadii uu tanaasulayo loo diidey inuu codadkiisa ku biiriyo mid kale.
12:47 Xeer hoosaadka waxa uu sheegaya inaan la qaylin karin ,la buuqi karin ,la sacbin karin ,la istaagi karin cid alaale cidii ka soo horjeesatana banaanka ayaa loo saarayaa
12:46 Codeynta waa qarsoodi ,waxana noqonaya musharaxa ku guuleysta saddex meelood laba meel,hadii ay dhici weyso afarta ugu cod badan ayaa cod loo qaadaya mar waxana ku guuleysanyaa saddex meelood laba meel ,hadii uu musharax ku guuleysan waayo codadka wareega labaad waxaa cod bixin loo qaadaa labada musharax ee ugu cod badan oo kan cod bata noqonayo madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Somalia.
12:45 Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Somalia waxa dooranaya Barlamanka ,ugu yaraan saddex meelood labo meelood waa inay joogtaan meesha
12:44 Fadhigan waxa gudoominaya Prof.Jawaari iyo labadiisa ku xigeeno.
12:42 Kul ayaa hoolka ka jira ,waxana loo keeney gudoonka Barlamanka Marwaxad halka laga dareemayo mudanayaasha & musharaxiinta inuu dhankooda dhibayo kulku.
12:41 Maryam Cali ayaa loo yeereya haatan.
12;38 Sawaxan oo buuq ayaa ka yeera hoolka shirku ka socdo.lamana garanayo waxay ku doodayaan xildhibaanada qaar oo istaagay.
12: 37 240 Xildhibaan ayaa fadhida ,98 ayaa ogol tiri waxaa diidey 65 waxana ka aamustey 50 Xildhibaan.
12;35 Weli tirintii codadka ayaa lagu hawlanyahay ''inta diidan''.
12:31 Mahiga ,Safiirka Turkiga ,ergayda EU-da iyo safiirka Britain ayaa isku xiga.
12:31 Musharaxiinta ayaa hoolka fadhiya safka ugu horeeya waxana wajiyadooda ka muuqata feejignaan.
12:30 Inta diidan ayaa lagu celinayaa tiradooda ,waxana la sheegey in tiradu ka khaldantay xoghaynta Barlamanka
12:28 Waxa la sugayaa tirada codka iyo natiijada soo baxdey.
12:27 Jawaari : ''Gacantaada muuji hana is qarin qofka diidanow''
12:26 Jawaari Sacabka waa diidanyahay waxana uu markasta codsanayaa in la joojiyo.
12:25 Codadka inta diidan ayaa la tirinayaa
12:24 Inta diidan talooyinka la soo jeediyey gacanta ha taageen.
12;23 Natiijada codka la qaadey ayaa la sugayaa waana gacan taag HAA ama MAYA.
12:22 Xoghaynta ayaa haatan codadkii tirineysa
12:21 Jawaari : " War aamusa bilaahi calaykum''.
12:20 Jawaari waxa uu codsadey in cod loo qaado inta ogol warbixinta ay soo gudbiyeen guddiga dhamaystirka qaabilsan.
12:17 Jawaari ayaa ku soo laabtey hadalka waxana uu ka codsadey xildhibaanada balse ma dhamaystirin hadalka oo hakad ayaa soo galay.
12:16 Mar kale waxa la codsadey in xildhibaanada laga dhex baxo.
12:15 Dhamaan hala fariisto ,weli hakad ayuu ku jiraa shirku.
12:12 Baaritaano culus ayaa la marinayaa cid kasta oo soo galaysa hoolka shirku ka socdo
12:11 Waxa fadhiya kulanka 209 xildhibaan oo qaarkood hada soo gaarey goobta
12:10 Hakad ayaa soo galaya kulanka oo marba qolaa la aamusinayaa
12:07 ''Guddiga Baratakoola waxa la codsanayaa inay dhameeyaan qalalaasaha alabaabka ka taagan,xildhibaanadana waxa laga codsanayaa in ay dulqaad muujiyaan''
12:06 Jawaari : ''intaan xildhibaanada ahayn oo dhex fadhiya ka dhex baxa xildhibaanada'',
12:05 Jawaari: ''Sacabka iga joojiya hadii kale banaanka ayaan idiin saarayaa''
12:04 Gudoonka Barlamanka ayaa u keeney taladaasi islamarkaasina gudoonku u xildhibaanada u si gudbiyo .
12:03 Guddigu waxa uu isku raacey in dadkii horey loo diidey maxkamaduna go'aamisey inay ka mid noqon karaan ,waxaan ku gaarney go'aan inay ka mid noqon karaan Barlamanka.
12:02 Guddigu waxa uu arkey go'aankii maxkamada ,waxa uu fiiriyey Dastuurka ,waxa uu wareystey odayaasha dhaqanka,waxana uu ka koobanyahay 10 Xildhibaan.
12:01 Nuur Faarax Jaamac ayaa hadalaya hada oo ka mida guddiga talo bixinta loo igmadey dhamaystirka xubnaha dhiman Barlamanka.
11:58 Jawaari waxa uu codadey in sacabka la joojiyo iyo buuqa
11:57 Jawaari waxa uu ku soo dhoweyey guddiga loo xilsaarey dhamaystirka xubnaha dhiman Barlamanka
11:53 Talefanada banaanka ayaa looga reebey xildhibaanada oo albaabka ay uga reebeen guddiga la-dagaalanka musuqmaasuqa.
11:52 Ajandaha Barlmanka maanta waa hal qodob oo ah doorashada madaxweynaha dalka
11:52 Jawaari: ''Lama soo dhex gali karo xildhibaanada ,waayo waxay wareyrineysaa qaabka loo shaqeynayo ''
11:51 Jawaari: Musharaxiinta waxaan u balanqaadayaa doorasho caadil ah inay ka dhaceyso maanta meeshan aan joogno 11:50 Jawaari: ''Buuq iyo rabsho cidii sameysa banaanka ayaa loo saarayaa''
11:49 Gen.Muuse Xasan Cabdule ayaa kormeeraya sanaadiiqda Doorashda.
11:48 Jawaari: ‘’Waxaan diyaar u nahay maanta in Jamhuriyadii saddexaad Somalia aan caleemo saarno,waxaan u hanbalyeynayaa guddiga doorashada sida ay isku hawleen ,Xildhibaanadana waxaan ka sodsanayaa inay hufnaan ay wax u doortaan’’.
11:47 Jawaari: ‘’Waxaan markhaati ka ahay in shacbiga Soomaliyeed yahay kan ugu wanaagsan oo is xakumi kara’’.
11:43 Gudoomiyaha Barlamanka Somalia Prof.Jawaari ayaa lagu soo dhoweyey hada oo furaya kulanka.
11:42 Waxa si toos ah u bilaabmatey doorashada madaxtinimo ee Somalia ,waxana haatan la aqrinayaa aayahada Quraanka Kariimka ah
11:20 Magaalada Muqdisho ayaa waxa la filayaa in goor dhow maanta 10 September,2012 uu ka furmo kulanka lagu dooranayo madaxweynaha Somalia afarta sano ee soo socota.
Hoolka Gen.kaahiye ee Iskuulka Booliska oo horey loogu qabtey doorashadii gudoonka Barlamanka ayaa isna madaxweynaha lagu dooranayaa.
24 musharax ayaa u taagan qabashada jagada ugu sareysa dalka ,waxana dhamaan u dhegtaagayaa dadka Soomaliyeed meel kasta oo jooga.
Dowladda Puntland ayaa ka digtey inay kuriga ku soo laabtaan xubno horey ugu fashilmey gudashada hawsha qaran ee loo igmadey.waxana goobta ku qulqulaya masuuliyiin ka socota beesha Caalamka iyo weriyaal caalami ah.